katiecat - Mpihira Grace Fahasoavana
@katiecat • Niditra tamin'ny jona 2021
21 taona, 9 volana lasa izay
Folsom, CA, Etazonia
Lehilahy, fifankatiavana mety, daty misy fikasana matotra, saina vady
Fiangonana presbiteriana ortodoksa (OPC)
Kely / Petite
Ao amin'ny College ankehitriny
Any amin'ny faritra ambanivohitra
Tsy mifoka sigara aho ary tsy tiako ny miaraka amin'ny mpifoka
Tena mifamatotra akaiky izahay mianakavy. Nofinofiko foana ny hiaina amin'ny faritra iray amin'ny fianakaviako rehefa manomboka fianakaviana aho. Mipetraka miaraka amin'ny ray aman-dreniko sy rahavaviko aho izao. Ny rahalahiko (izay zokiko) dia nifindra tany amin'ny 3 taona lasa izay.
Tiako ny toerana onenako nefa tsy toheriko ny hifindra any an-kafa; na izany aza, tiako ny mipetraka any California sy manakaiky ny fianakaviako sy ny fiangonako.
Nahazo fitahiana aho satria notezaina tamin'ny Kristiana ka tsy tadidiko ny taona tena nanatonana azy, saingy nanao ny fanekeko ny finoako aho tamin'izaho 12 taona. Mamaky ny Baiboly isan'andro aho ary manandrana mamaky boky tsara amin'ny ampaherezo aho amin'ny diako kristianina. Mamaky aho izao, “Ny Filazantsara dia Miaraka Amin'ny lakilen'ny trano”, nataon'i Rosaria Butterfield.
Ny Doctrines of Grace dia nisy fiatraikany tamin'ny fiainako satria maneho amiko isan'andro fa tena mpanota aho ary mendrika ny fahatezerana sy ozona avy amin'Andriamanitra avokoa isika rehetra fa tsy ny fitiavana sy ny fahasoavana izay nasehony antsika tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazofijaliana noho ny fahotako.
Mila fotoana mangina aho indraindray ary avy eo satria somary introverted aho fa tsy extroverted. Na izany aza, tiako ny miaraka amin'ny olona ary maniry fotoana koa ny olona. Mamaky zavatra be dia be aho ary mijery seho indraindray mandritra ny fotoana mangina.
Mianatra Business Business ao amin'ny Arizona State University aho amin'ny Internet.
Tsy dia noeritreretiko loatra izany, saingy heveriko fa i Paul no olona tiako indrindra amin'ny Baiboly. Izany dia satria isaky ny mamaky boky izay nosoratany aho dia hitako ny herin'ny tanan'Andriamanitra sy ny fahasoavana tsy hita refesina nomeny an'i Paul, ary izany dia mahatonga ahy hieritreritra ny zavatra vitany ho ahy sy ny kely tokony hanaovako azy. Ny toetran'i Paul dia tena manampy ahy hahatsiaro fa ny olona rehetra dia azo vonjena ary fahasoavana avy amin'Andriamanitra izany.
Te-hanambady aho. Ny zavatra iray sahirako dia ny fahafaham-po satria tsy mbola nahita olona aho ary mampahatsiahy foana ny tenako fa mifehy Andriamanitra. Te hanana vady sy mitaiza zanaka aho ary antenaina fa hanome ahy izany fotoana izany ny Tompo.
Voalohany indrindra dia misaotra aho fa notezaina nahafantatra sy nitia an'i Jesosy ary voahodidin'ny rivo-piainana kristiana.
Faharoa, feno fankasitrahana aho noho ny fianakaviako. Tena mifamatotra akaiky izahay ary tia mifananihany ary miteny aho fa ny rahavaviko dia namako akaiky sasany. Mankasitraka ireo namako akaiky ahy koa aho, satria manampy ahy tsy ho ketraka na tsy sambatra amin'ny maha-mpitovo ahy raha manana finamanana lalina aho.
Farany, feno fankasitrahana aho noho ny fiangonako. Tiako ny fiaraha-monina misy ahy miaraka amin'ny fiangonako sy ny fomba isian'ny Evanjely isaky ny toriteny, isaky ny Alahady. Ampy lehibe ny fiangonako ka misy vondron'olon-dehibe sy vondron'olon-dehibe nefa mbola kely ihany ka fantatry ny rehetra ny tsirairay, izay tena mahafinaritra.
Tiako ny olona mavitrika antonony, satria tiako ny any ivelany. Ankafiziko ihany koa ny olona somary mahatsikaiky sy mankasitraka ny esoeso. Ny olona iray izay tena miahy an'i Jesosy ary koa nohavaozina dia manana toetra lehibe. Olona mety hifandray tsara amin'ny fianakaviako koa no zava-dehibe, satria tena akaiky azy ireo aho.
Ny rahavaviko no olona nanan-kery indrindra teo amin'ny fiainako. Tena akaiky izy sy izy ary mifanaraka tsara izahay. Izy no nitaona ahy hieritreritra tsara ary hanatanjaka ahy amin'ny resadresaka ataonay rehefa kivy aho.
Iray ihany ny fifandraisako. Naharitra telo volana izany ary ny antony namaranana azy dia satria samy tsy nahatsapa fifamatorana ara-pientanam-po isika roa. Tsy dia nanintona ahy loatra ilay olona nampiarahiko - sady ara-batana no hendry, koa sarotra tamiko ny nanohy izany fifandraisana izany. Fa lehilahy nahafinaritra izy ary tena voatahy aho afaka niaraka taminy ary nandalo izany zavatra niainany izany.
Mbola mipetraka miaraka amin'ny ray aman-dreniko aho. Hatramin'ny niasako tao amin'ny Starbucks ary namaky ny oniversite aho dia hitako fa hendry indrindra ny mijanona ao an-trano mandra-pahazoako asa tsara kokoa taorian'ny nahazoako diplaoma tamin'ny mari-pahaizana bakalorea.
Ny andinin-tsoratra masina mampahery tiako indrindra dia ny Efesiana 2: 4-10. Mampatsiahy ahy mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony amintsika raha afaka nifidy ny fahamarinana Izy.
Niasa tamina trano fisotroan-dronono aho tamin'izaho 15 taona nanompo sakafo ho an'ireo mponina tao. Afaka niara-niasa tamin'ny zokiko lahy aho, izay tena nadio.
Tamin'ny faha-17 taonako dia nanomboka tao amin'ny Starbucks aho ary niasa tao hatrizay, nampiasa ny sekoly an-tserasera maimaimpoana an'i Starbucks tamin'ny alàlan'ny ASU hahazoana ny mari-pahaizana. Mbola manana roa taona aho amin'ny mari-pahaizana.
Niasa tao amin'ny Starbucks nandritra ny efa ho efa-taona aho ary tena tiako. Vao tsy ela aho no nifindra tany amin'ny Starbucks vaovao, izay ny Starbucks be olona indrindra ao amin'ny distrikanay ary tiako izany! Tiako ny manao zava-pisotro ary indrindra ny fahafantarana ny mpanjifa-ny olona tsirairay dia manana tantara hafa ary milamina rehefa mizara ampahan'ny. Tsy tiako koa ny kafe ary tsy tiako ny mandany vola amin'ny zavatra hafa, ka tena mandeha tsara ireo zavatra roa ireo 🙂
Tiako ny mandeha, ka ny iray amin'ireo tanjoko dia ny hahazo mari-pankasitrahana scuba-antsitrika ary mahazo manitrika toerana tena milay toa ny Great Barrier Reef na Cozumel
Te-hanangana fianakaviana aho ary hanan-janaka 🙂
Te-hitsangatsangana any Eropa aho ary hanandrana ny sakafo ary hahita ny fahitana any. Tena te-hidina amin'ny tsenan'ny tantsaha any Frantsa aho ary hahita ireo legioma vaovao ary hanandrana ireo sakafo mahatalanjona any! 8
Teraka tany San Jose, CA. Nifindra tany Folsom, CA aho avy eo, tamin'izaho roa taona, izay nahalehibe ahy ary mbola eto aho.
Nandeha tany Nevada, Oregon, Washington, North Carolina, Florida ary Michigan aho
Avy tany Etazonia aho, nitsidika an'i Roatan; Honduras, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, Cozumel, Cayman Islands (tiako ny mandeha raha tsy hainao ny milaza izany!)
Raha nanana herinandro be atao aho dia hipetraka mandritra ny fotoana fohy hamakiana na hijerena seho iray-tiako hamboarina ka mazàna mandoko rehefa mijery zavatra. Na hanendy aho-tiako vatomamy, ka miala sasatra mandritra ny fotoam-pahavaratra ny fanaovan-tsakafo.
Tiako ny eny ivelany, ka ny fitsangantsanganana, ny andro amoron-dranomasina, na ny volley dia tena mahafinaritra ahy. Izaho dia ao amin'ny ekipa tenisy vehivavy ao amin'ny oniversite oniversitenako, ka milalao tenisy betsaka aho. Zava-dehibe amiko ny mijanona ho salama, ka milomano efatra andro isan-kerinandro aho ary manao fanazaran-tena hafa koa.
Tiako vatomamy-indrindra sôkôla.
Tsy azoko antoka ny zavatra tsapako miaraka amina fifandraisana lavitra - ka aleoko misy olona mipetraka tsara eo akaikiko, saingy tsy mampaninona ahy ny mitondra fiara mandritra ny ora vitsivitsy. Voalaza fa, mbola tsy nanandrana lavitra aho, ka tsy afaka mandresy zavatra mbola tsy nanandrana.
Tiako ny eny ivelany sy milalao tenisy, miezaka ny ho tia an 'Andriamanitra aho ary manaraka ny didiny. Tiako ny mofomamy, mamaky, ary manaja. Introverted aho nefa koa extroverted, ka somary antsasaky ny anelanelany, na dia mirona kokoa amin'ny introverted aza aho. Miasa ao amin'ny Starbucks aho ary roa taona miala amin'ny fahazoana ny mari-pahaizana licence amin'ny ASU for Sports Business.
Mofomamy / mahandro
Volley (na dia tsy izaho aza no mahay indrindra)
Mijery sary mihetsika